GỤỌ NKE Albanian Amharic Arabic Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Guarani Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tajiki Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese
OTU nwaanyị bụ́ Onye Kraịst dere banyere mmehie o mere n’oge gara aga, sị: “Ekwetaghị m na Jehova ga-agbaghara m kpamkpam, echekwara m na obi m ga na-ama m ikpe ruo mgbe m nwụrụ.” N’eziokwu, obi anaghị eru onye ọ bụla akọnuche ya na-apịa ụtarị ala. Ma, Baịbụl kwuru ihe nwere ike ime ka obi dajụọ ndị mmehie chegharịrịnụ. Ka anyị tụlee ihe ọbụ abụ bụ́ Devid dere n’Abụ Ọma 103:8-14.
Devid maara na “Jehova dị ebere,” marakwa na ọ naghị ‘ahụta mmejọ anyị mgbe niile.’ (Amaokwu nke 8-10) Ọ bụrụ na Chineke ahụ ezigbo ihe mere ọ ga-eji meere onye mmehie ebere, ọ na-agbaghara onye ahụ kpamkpam. Devid, onye bụ́ ọkà n’ide abụ, mere ihe atụ atọ ndị gosiri otú ebere Chineke na-emere anyị si dị ukwuu.
“Dị ka eluigwe si dị elu karịa ụwa, otú ahụ ka obiọma o nwere n’ebe ndị na-atụ egwu ya nọ si dị elu.” (Amaokwu nke 11) Ọ bụrụ na anyị elee anya n’eluigwe n’abalị, anyị agaghị aghọtali otú eluigwe dịruru anya n’ụwa. Devid si otú a mee ka anyị ghọta na ebere Jehova dị ukwuu. Nke a bụ otu ụzọ Jehova si egosi na ọ hụrụ anyị n’anya. Ndị Chineke na-emere ebere a bụ “ndị na-atụ egwu” ya, ya bụ, “ndị ji obi umeala na obi ha niile na-asọpụrụ ya,” dị ka otu ọkà mmụta si kwuo ya.
“Dị ka ọwụwa anyanwụ si dị anya site n’ọdịda anyanwụ, otú ahụ ka o mere ka njehie anyị dị anya n’ebe anyị nọ.” (Amaokwu nke 12) Olee otú ọwụwa anyanwụ dịruru anya ma e si n’ọdịda anyanwụ gawa ya? Ọ dị ezigbo anya. Otu ọkà mmụta kwuru na ọ bụghị ihe e ji ọnụ ekwu; mmadụ enweghịdị ike ịghọta otú ọ dịruru anya.” Ihe Devid na-agwa anyị n’ebe a bụ na mgbe ọ bụla Chineke gbaghaara anyị mmehie anyị, ọ na-atụfu ya n’ebe dị nnọọ ezigbo anya.
“Jehova emeworo ndị na-atụ egwu ya ebere dị ka nna si emere ụmụ ya ebere.” (Amaokwu nke 13) Devid mụrụ ụmụ. Ọ maara na nna nke hụrụ ụmụ ya n’anya na-emetere ụmụ ya ebere, karịchaa, ma ọ bụrụ na ha nọ ná mwute. Devid mesiri anyị obi ike na Nna anyị nke eluigwe, bụ́ onye hụrụ anyị bụ́ ụmụ ya ndị nọ n’ụwa n’anya, ga-emere anyị ebere, nke ka nke, ma ọ bụrụ na anyị echegharịa ma jiri “obi tiwara etiwa, nke nọ ná mwute” rịọ ya mgbaghara.—Abụ Ọma 51:17.
Mgbe Devid kwuchara ihe atụ atọ ahụ, o kwuziri ihe mere Jehova ji emere ụmụ mmadụ na-ezughị okè ebere. Ọ sịrị: “Ya onwe ya maara nnọọ otú e si kpụọ anyị, ọ na-echeta na anyị bụ ájá.” (Amaokwu nke 14) Jehova maara na ọ bụ ájá ka e ji kpụọ anyị, na anyị adịghị ike, nakwa na o nwere ihe ndị anyị na-agaghị emeli. Ebe Jehova maara na anyị bụ ndị mmehie, ọ ‘dị njikere ịgbaghara anyị mmehie,’ ma ọ bụrụhaala na anyị egosi na anyị ji obi anyị niile chegharịa.—Abụ Ọma 86:5.
Ihe ndị a Devid kwuru banyere ebere Jehova ò ruru gị n’obi? Nwaanyị ahụ e kwuru okwu ya ná mmalite mụrụ ihe Baịbụl kwuru banyere otú Chineke si dị njikere ịgbaghara anyị mmehie. Ihe ọ mụtara mere ka o kwuo, sị: “Aghọtawala m na m nwere ike ịbịaru Jehova nso, ọ dịkwa m ka è bupụla ibu dị arọ m bu.” * Ọ̀ bụ na ọ dịghị mma ka ị matakwuo banyere ebere Chineke na ihe ndị ị ga-eme ka o ruo gị aka? Ọ bụrụ na i mee otú ahụ, ọ ga-adịkwa gị ka è bupụrụ ibu dị arọ i bu.
Ebe anyị na-atụ aro ka ị gụọ na baịbụl n’ọnwa ọgọst:
▪ Abụ Ọma 87-118
^ par. 9 Gụọ isiokwu bụ́ “Chineke nke ‘Dị Njikere Ịgbaghara Mmehie,’” n’isi nke 26 nke akwụkwọ bụ́ Bịaruo Jehova Nso. Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya.
“Aghọtawala m na m nwere ike ịbịaru Jehova nso, ọ dịkwa m ka è bupụla ibu dị arọ m bu”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ “Ọ Na-echeta na Anyị Bụ Ájá”